Digniinnada Cadaadiska Walaacista - Abaabulka Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Resources Dareenka yareynta diiqada
• Baarista MRI waxay muujisay in ay yaraadeen maadada caanaha (unugyada dareemayaasha) ee amygdala (walwal)
• Kobcinta caanaha ee hippocampus - xasuusta iyo barashada
• Soo saarey faa'idooyin cilmi nafsi oo joogta ah maalinta oo dhan
• In la soo sheego dhimista cadaadiska
Isku day duubista raaxada bilaashka ah
Isticmaal our jimicsi nasasho oo lacag la'aan ah si ay kaaga caawiso inaad nasato oo aad dib u dhigto maskaxdaada. Iyada oo la yareeyo wax soo saarka sunta neurokemicals, waxaad u oggolaaneysaa jirkaaga inuu bogsiyo iyo maskaxdaada si aad u isticmaasho tamarta fikradaha waxtar leh iyo fikradaha cusub.
Qofka saddexaad waa inuu nasteexo maskax la'aanta isagoo aan muujin wax calaamado ah oo dhaqdhaqaaq jireed ah si aad u sameyn karto tareenka ama marka dadka kale ku wareegsan yihiin. Waxay soconeysaa daqiiqado 18.13.
Waa kuwan qaar kale dareenka Dareenka BBC.
<< TRF waxay kobcisaa Kheyraadka Buugaagta lagu taliyay >>